QM oo War ka soo Saartay Shaqaale lagu Dilay Muqdisho. | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta QM oo War ka soo Saartay Shaqaale lagu Dilay Muqdisho.
QM oo War ka soo Saartay Shaqaale lagu Dilay Muqdisho.
Qarramada Midoobey ayaa si aad u cambaareysay dil toddobaadkan degmada Kaxda ee dulleedka magaalada Muqdisho loogu geystay Labo ruux oo ka tirsanaa shaqaalahooda samafalka.
War qoraal ka soo baxay Xafiiska UNSOM ayaa lagu sheegay in Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ay si adag u cambaareyneysaa dilka laba ka mid ah shaqaalaha samafalka, oo la sheegay inay magaalo madaxda Muqdisho ku dileen dad looga shakisan yahay inay yihiin Al-Shabaab.
Sidoo kale QM ayaa tilmaamay in Labada shaqaale samafal ee Soomaaliyeed ay ka shaqeynayeen ololaha socday ee tallaalka cudurka dabaysha, ee ay soo qabanqaabiyeen Sanduuqa Carruurta ee Qaramada Midoobay (UNICEF), Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) iyo Wasaaradda Caafimaadka ee Dowladda Federaalka.
Qarramada Midoobay ee Soomaaliya waxay ugu baaqeysaa mas’uuliyiinta/hay’adaha inay baaritaan buuxa ku sameeyaan dilalka, waxayna tacsi tiiraanyo leh u diraysa qoysaska dhibbanayaasha.
Ugu dambeyntii QM ayaa Sheegtay in Amniga somalia wali caqabad weyn ku ah howlaha samafalka ee ka socda Soomaaliya. Tan iyo bishii Janaayo 2020, 191 dhacdo oo ka dhan ah howlaha samafalka ayaa la diiwaangeliyay oo 13 shaqaale samafal lagu dilay, 12 lagu dhaawacay, 24 lagu afduubay iyo 14 lagu xiray ama si ku meel gaar ah loo xiray
Hadalka QM ayaa ku soo aadeyso xili labo shaqaale samafal lagu dilay Muqdisho.
Maqaal horeWeerar lagu Jebiyay Al-Shabaab oo ka Dhacay Marko.
Maqaal XigaGudoomiye Mursal oo farriin u diray xukuumadda cusub